HomeTURKEYGobolka Central Anatolia42 Konya
Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay wuxuu ka soo qeyb galay Shirka Golaha Konya ee Warshadaha (KSO) wuxuuna siiyay warshadayaasha warshadaha macluumaad kusaabsan Konya Metro, KONYARAY Line Suburban iyo mashaariicda gaadiidka. Gudoomiyaha Golaha KSO Tahir [More ...]
Khadadka Tareenka Xawaare Sare ee Konya-Ankara wuxuu sii wadaa inuu ka mid noqdo waddooyinka gaadiidka ugu doorbidaan muwaadiniintu. Tirada rakaabka, oo ahaa 2018 milyan sanadka 8,1 ee YHT, ayaa kordhay 2019 boqolkiiba sanadka 2 ilaa 8,3 milyan. [More ...]
Munaasabadda saxeexa ee KONYARAY Commuter Line Project, oo lagu xaqiijin doono iskaashiga degmada Konya Metropolitan District iyo TCDD General Directorate, ayaa la qabtay. Isaga oo ka hadlaya xaflada lagu qabtay Xarunta Dhaqanka ee Magaalada Mevlana, Duqa Magaalada Dowlada Hoose ee Magaalada Konya [More ...]
Sida lagu xusay daraasad ku saabsan cinwaanka ciriiriga taraafikada ee magaalooyinka adduunka, Konya wuxuu noqday safka 56-aad ee ugu ciriiri badnaa 416 magaalo oo ka kala socda 329 waddan liistada. Sida lagu xusay daraasad caalami ah, taraafikada adduunka [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Konya, oo ka shaqeyneysa sidii ay u furi lahayd wadooyin kale oo loogu talagalay waddooyinka qaar in la xiro dhismayaasha magaalada, oo ah maalgashiga ugu muhiimsan taariikhda Konya, baaxaddaan, Beyşehir Ring Road iyo Fırat Street ayaa midba midka kale ku xiran. [More ...]
2020 Qiimaha Tikidhada Xawaaraha Sare ee hadda ah Yadoo Jadwallada Waqtiga iyo Waqtiga: Tareenada xawaaraha sare leh ee nolosheena u fududeeya gaadiidka is-dhexgalka waxay sii wadaan isku xirka magaalooyinka kala duwan, rakaabka iyo dhaqamada. [More ...]